Bannaanbaxyo ka socda dalka Ivory Coast. | Somalia News
Dawladda Hindiya oo Sheegtay inay KunHawlan tahay Muwaadiniin Lagaga Hayso Gudaha Somalia
October 24, 2020 | Published by: yaska New Delhi (OWN) – Dowladda Hindiya ayaa ka hadashay Muwaadiniinta lagaga Hayso Somalia Gaar ahaanna Caasimadda Muqdisho. 33 muwaadiniin Hindi ah ayaa Warbaahintu ku warrantay inay Afduub ku haysato shirkad Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Wasiirka Arrimaha Debadda Hindiya Subrahmanyam Jaishankar ayaa sheegay iney wadaan dadaalo ay ugu gar-gaarayaan shaqaalaha reer Hindiya, kuwaas oo la sheegay iney dhibaato ku heyso gudaha Soomaaliya. Wasiirku wuxuu boggiisa twitter-ka ku qoray in Safaaradda ay ku leeyahiin Nairobi iyo wasaaradiisa ay ka shaqeyn doonaan sidii dib wadankooda loogu soo celin lahaa 33 muwaadin oo ku xayiran Muqdisho. Rajesh Mani oo u dhaq-dhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegay in 33-ka qof oo ahaa shaqaale, islamarkaana 25 ka mid ah ay kasoo jeedaan gobolka Uttar Pradesh, ay shirkad Soomaali ah ku haysato Muqdisho muddo sideed bilood ah. Sida uu sheegay Mani, dadkan ayaa shirkadda Soomaalida ah ku biiray 10 bilood ka hor, markii ay ka heleen qandaras shaqo. Waxa uu yiri in labadii bil ee ugu horrreysay loola dhaqmay si wanaagsan, hase yeeshee sideeddii bilood ee dambe aan la siin mushaharkooda. Markii ay dalbadeen mushaharkooda ayuu sheegay in laga qaatay baasabooradooda, loogu hanjabay in la toogan doono, laguna qasbay inay shaqeeyaan. Waxa uu intaas ku daray inay ku dhex nool yihiin warshad ay leedahay shirkadda. Lama shaacin magaca shirkadda dadkan ay u afduuban yihiin, iyo sababta loo haysto midna. Dowladda Soomaaliya ayaan wali wax war ah kasoo saarin arrinka iyadoo sidoo kale shirkadda lagu eedeeyay gabood-falkaan aysan sidoo kale afkeeda u kala furin wararka ay baahinayaan warbaahinta.
Ra’iisul Wasaare Rooble “Waa in xilalka aad la wareegtaan si looga faa’iideysto waqtiga haray”+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan xubnaha golaha Wasiirada ee maanta la dhaariyay. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka horyaala Golaha Wasiirrada iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ah, si loogu guuleysto ka miro dhalinta qorshaha xukumadda ee ku salaysan ku u adeeggidda bulshadda iyo sareysta sharciga . Ra’iisul Wasaaraha ayaa kula dardaarmay Golaha Xukuumadda in si dhaqso ah ay shaqooyinkooda u guda galaan, xilalkana ula wareegaan, si looga faa’iideysto waqtiga haray, loona fuliyo qodobadii ku jiray barnaamijka Xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey. “Waxaa Alle mahadii ah inaan yeelanay kulankii ugu horeeyey kadib markii maanta la dhaariyay golaha cusub, waxaana idinka rajeynayaa inaad xilalka si deg deg ah ula wareegtaan, si looga faa’iideysto waqtiga haray”.ayuu yiri R/W Maxamed Xuseen.
Madaxweyne Farmaajo Oo xilka qaadis & Magacaabis sameeyey (Akhriso)
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Madaxweynaha J.F.S mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabis sameeyey xilli Doorashada loo diyaar garoobayo. Madaxweynaha ayaa Taliye ku-xiggeenka ciidanka Xoogga Dalka umagacaabay Jeneraal Cabaas Amiin Cali oo horay u ahaa Taliyaha Ciidanka dhulka. Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Dhulka XDS ayaa loo magacaabay Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, halka Taliye ku-xiggeenka Ciidanka Dhulka loo magacaabay Jeneraal Xuseen Xoosh, iyadoona maanta ay xilalka la wareegeen, kadib Munaasabad lagu qabtay xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga oo ah Taliska Ciidanka xoogga Dalka. Shaacin rasmi ah laguma sameyn saraakiishani xilalka loo magacaabay iyadoo murashaxiin diidan hanaanka Madaxweyne Farmaajo ay diidan yihiin in waqtiga yar ee Xukunka Dalka looga faa’iideysto magacaabida xilalka. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Raiisul wasaaraha Somalia oo Ka Hadlay Yoolka Xukuumadiisa iyo Ansixintii ay Maanta Ka Heshay Baarlamaanka
Madaxweweyne Farmaajo oo xilkii ka qaaday taliye ku-xigeenkii Ciidamada Xoogga Dalka & Taliyeyaal la magacaabay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbedal ku sameeyay qar ka mida taliyeyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo xilkii ka qaaday taliye kuxigeenkii ciidamada Milateriga. Isbedelkan ayaa saameeyay Taliye ku-xiggeenka ciidanka Xoogga Dalka oo loo magacaabay Jeneraal Cabaas Amiin Cali, kaasoo hore u ahaa Taliyaha Ciidanka dhulka, halka Taliyaha Ciidanka Dhulka XDS loo magacaabay Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, waxaana Taliye ku-xigeenka Ciidamada Dhulka loo magacaabay Col. Xuseen Xoosh. Ad Lama shaacin wareegtada xil ka qaadsita taliye ku xigeenkii ciidamada xoogga dalka iyo taliyeyaasha la kala bedelay, waxaana kaliya ay warbaahinta dowladda sheegtay inay maanta xilalkii la kala wareegeen, iyadoo xil wareejintu ka dhacdayy xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga. Madaxweyne Farmaajo ayaa noqday madaxweynihii isbedellada ugu badan ku sameeyay Ciidamada Xoogga Dalka, taasoo keentay in talisyada qaarkood ay sanadkiiba yeeshaan laba taliye. Warar Xul ah
Shaxda Rasmiga Ah Ee Barcelona Vs Real Madrid: Ayaa Ku Bilowday Shaxda El Clasico.
Tababarayaasha Zidane iyo Koeman ayaa soo saaray shaxda ay isaga hor iman doonaan kulanka El Clasico kana tirsan horyaalka La Liga. Labada tababare ayaa ku soo galay shaxdooda ugu adag iyada oo ay Barcelona weerarka hogaaminayaan xiddigaha Ansu fati iyo Lionel Messi. Dhanka kale Vinícius & Benzema ayaa hogaaminaya weerarka Real Madrid kulan au labada tababare doonayaan in ay ku soo laabtaan wadada guulaha. Shaxda Rasmiga Ah Ee Kulanka: Barcelona: Neto, Dest, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De jong, Pedri Coutinho, Ansu Fati, Lionel Messi Real Madrid: Courtois, Nacho, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Asensio, Vinícius, Benzema.
Marco Asensio Oo Kashifay In Uu Ku Dhawaaday Ku Biirista Barcelona.
Xiddiga Real Madrid Marco Asensio ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhawaaday inuu u saxiixo Barcelona ka hor kulanka El Clasico ee ugu horeeya xilli ciyaareedkaan. Xiddiga reer Spain ayaa Madrid ugu soo biiray isagoo 18-sano jir ah oo wacdarro dhiga 2014 kadib markii uu qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxda Mallorca. Laakiin xiddiga ayaa haatan qirtay inuu si fudud ugu biiri karay kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan Madrid ee Barcelona waliba maanta ka hor iman lahaa Madrid. Wareysiga uu siiyay AS, waxaa la weydiyay hadii ay run tahay inuu u saxiixi karay Barca, Asensio ayaa yiri: ‘Haa, waan kari lahaa, sidoo kale kooxo kale. “Waxa mar walba jiray kooxo waaweyn oo xaaladaada wax kaa waydiinaya, markii aan ku biiray Real Madrid wax walba waxa ay u dheceen si deg-deg ah”. “Marka ay fursadaasi is muujiso waa wax aan macquul aheyn in la yiraahdo maya”. Sii Akhriso: DEG-DEG: Baarlamaanka Somaliya Oo Ansixiyay Xukuumadii Uu Soo Dhisay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble
Bannaanbaxyo ka socda dalka Ivory Coast.
Abidjan:- Kumanaan qof oo ka mid ah taageerayaasha mucaaradkaa Ivory Coast ayaa isugu soo baxay caasimadda Abidjan, waxayna ka soo hor jeedaan qorshaha madaxweyne Alassane Ouattara uu markii sadexaad ugu tartamayo xilka madaxtinimada dalkaasi ku yaalla galbeedka Afrika. Xiisadda ayaa kor u sii kacaysa ka hor doorashada sida wayn loogu loolami doono.
Supporters of Ivory Coast’s opposition coalition parties gather during a stadium rally to protest against President Alassane Ouattara’s bid for a third term, in Abidjan, Ivory Coast October 10, 2020. REUTERS/Macline Hien
Sadex todobaad ka hor xilliga codbixinta oo ah 31 bishan October, ayaa ku dhowaad 20,000 oo ruux waxaa ay isugu soo baxeen garoonka cayaaraha magaalada ganacsiga galabnimadii sabtida, ayagoo sitay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhegyo ay ka mid yihiin “dadku ma rabaan in xilli sadexaad oo sharci daro ah”
Ouattara, 78 sano jir ah, ayaa bishii August ku dhawaaqay in uu ka qaybgali doono doorashada ka dib markii ninka xisbiga talada haya ee RDHP u soo sharaxeen doorashada uu geeriyooday.
Go’aanka madaxwaynaha ayaa waxaa ka carooday mucaaradka, oo sheegaya in Ouattara uu ku xadgudbay dastuurka.
Ouattara ayaa xilka haya muddo 10 sano ah, dastuurka dalkaas ayaa qaba in madaxweynaha loo ogol yahay in labo xilli uu u tartami karo kursiga ugu sareeya dalka, hase yeeshee 2016 ayaa dastuurka wax ka bedel lagu sameeyay.
Golaha dastuurka dalka Ivory Coast ayaa sadex musharax oo keli ah u ogolaaday in ay ka qaybgalaan doorashada, waxaana kamid ah madaxweyne hore Henri Konan Bedie iyadoo dadka loo diiday doorashada uu ka mid yahay madaxweynihii hore Laurent Gbagbo.
In ka badan 3,000 oo ruux ayaa ku dhimatay rabshado ka dhashay doorashadii lagu murmay ee Ivory Coast 2010 ill 2011.
Mucaaradka ayaa shacabka ugu baaqay in ay sameeyaan kacdoon ka dhan ah xukuumadda, sidoo kale waxaa ay qaadaceen ka qeybgalka doorashada.
“Talada aan madaxweyne Ouattara siinayo waa in dadka reer Ivory Coast ka wadahadlaan arrintan. Waxaan rabnaa nabad. Dagaal ma doonayno ,” sidaa waxaa yiri Eve Botti, oo kamid ah taageeriyaasha xisbiga mucaaradka ah ee FPI, oo Reuters la hadlay.
Horaantii todobaadkan, wakiilo ka kala socda; urur goboleedka galbeedka Afrika ECOWAS, Midowga Afrika iyo QM ayaa tagay Abidjan ayagoo la kulmay saraakiisha mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah.
Ururka ICG ee xasaradaha adduunka ayaa ku baaqay in doorashada dib loo dhigo,isla markaana la saxo qaladaadka jira.
Previous articleGuddoomiyaha golaha Shacbiga oo ku booqday Isbitaalka Ordagan gabar bukaan ah.
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo kormeeray qaar kamid ah Isbitaallada Muqdisho+Sawirro
Maxaa kusoo kordhay 33-ka qof oo Hindida ah ee shirkad ‘ay ku haysato’ Muqdisho?
New Delhi (Caasimadda Online) – Dowladda Hindiya ayaa ka hadashay muwaadiniinta la sheegay in looga heysto magaalada Muqdisho, waxeyna sheegeen iney ka shaqeyn doonaan sidii loo sii deyn lahaa. 33 muwaadiniin ah oo u dhashay dalkaas ayaa lagu warramay inay afduub ku haysato shirkad Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Hindiya Subrahmanyam Jaishankar ayaa sheegay iney wadaan dadaalo ay ugu gar-gaarayaan shaqaalaha reer Hindiya, kuwaas oo la sheegay iney dhibaato ku heyso gudaha Soomaaliya. Wasiirka wuxuu boggiisa twitter-ka ku qoray in safaaradda ay ku leeyahiin Nairobi iyo wasaaradiisa ay ka shaqeyn doonaan sidii dib wadankooda loogu soo celin lahaa 33 muwaadin oo ku xayiran Muqdisho. Rajesh Mani oo u dhaq-dhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegay in 33-ka qof oo ahaa shaqaale, islamarkaana 25 ka mid ah ay kasoo jeedaan gobolka Uttar Pradesh, ay shirkad Soomaali ah ku haysato Muqdisho muddo sideed bilood ah. Sida uu sheegay Mani, dadkan ayaa shirkadda Soomaalida ah ku biiray 10 bilood ka hor, markii ay ka heleen qandaras shaqo. Waxa uu yiri in labadii bil ee ugu horrreysay loola dhaqmay si wanaagsan, hase yeeshee sideeddii bilood ee dambe aan la siin mushaharkooda. Markii ay dalbadeen mushaharkooda ayuu sheegay in laga qaatay baasabooradooda, loogu hanjabay in la toogan doono, laguna qasbay inay shaqeeyaan. Waxa uu intaas ku daray inay ku dhex nool yihiin warshad ay leedahay shirkadda. Lama shaacin magaca shirkadda dadkan ay u afduuban yihiin, iyo sababta loo haysto midna. Dowladda Soomaaliya ayaan wali wax war ah kasoo saarin arrinka iyadoo sidoo kale shirkadda lagu eedeeyay gabood-falkaan aysan sidoo kale afkeeda u kala furin wararka ay baahinayaan warbaahinta.
Maxaa kusoo kordhay 33 qof oo Hindi ah oo shirkad ‘ay ku haysato’ Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyey 33 qof oo Hindi ah oo shirkad ‘ay ku haysato’ Muqdisho
New Delhi (Caasimadda Online) – Dowladda Hindiya ayaa ka hadashay muwaadiniinta la sheegay in looga heysto magaalada Muqdisho, waxeyna sheegeen iney ka shaqeyn doonaan sidii loo sii deyn lahaa. 33 muwaadiniin ah oo u dhashay dalkaas ayaa lagu warramay inay afduub ku haysato shirkad Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda […] The post Wararkii ugu dambeeyey 33 qof oo Hindi ah oo shirkad 'ay ku haysato' Muqdisho first appeared on Caasimada Online.
Updated on October 24, 2020 1:03 pm